Phones author2- January 11, 2020
ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ Flagship Killer Model2ခုဖြစ်တဲ့ Redmi K20 နဲ့ Redmi K20 Pro တို့ကို မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ K20 ရော K20 Pro မှာပါ 6.39 inches ရှိ AMOLED Display ကို အသုံးပြု ပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါတော့...
OPPO A Family ရဲ့ မော်ဒယ်အသစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ OPPO A9 (2020) ကို ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာလက ထုတ်လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းဖုန်းဟာလည်း အခုဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံမိုဘိုင်းစျေးကွက်ထဲမှာလည်း ဝယ်ယူနိုင်နေပါပြီ။ ၎င်းဟာ ဘက်ထရီစွမ်းအားကောင်းမွန်ပြီး ကင်မရာစွမ်းအားပိုင်းမှာလည်း အထူးကောင်းမွန်မှုရှိတဲ့ အလယ်အလတ်တန်းစား စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မျက်နှာပြင်ကျယ်ကျယ်နဲ့ စက်စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်တဲ့ အဆင့်မြင့်စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်ပြီး ဒီဇိုင်းပုံစံကလည်း ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့...
Xiaomi Pocophone F1 ဟာ အဆင့်မြင့်မားတဲ့ Specs တွေကို ထည့်သွင်းထားပေမယ့် စျေးနှုန်းကလည်း သင့်တင့်မှုရှိတာကြောင့် သုံးစွဲလို့ကောင်းမွန်တဲ့ ဖုန်းတစ်လုံးပါပဲ။ စက်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားပြီး ဘက်ထရီစွမ်းအားလည်း အထူးကောင်းမွန်ပါတယ်။ GSM, HSPA နဲ့ LTE networks တွေကို ထောက်ပံ့ပေးထားပြီး Hybrid Dual SIM စနစ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းအရွယ်အစားက 155.5...
Phones author2- January 3, 2020
Xiaomi Redmi K30 ဟာ အရည်အသွေးမြင့် အလယ်အလတ်တန်းစားစမတ်ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းကို GSM, CDMA, HSPA, EVDO နဲ့ LTE networks တွေမှာသုံးနိုင်ပြီး Hybrid Nano Dual SIM စနစ်ကို ပံ့ပိုးပေးထားပါတယ်။ ဖုန်းအရွယ်အစားက 165.3 x 76.6 x 8.8 mm ရှိပြီး...
iPhone ရဲ့နောက်ဆုံးထွက်မော်ဒယ်တွေထဲကမှ Pro version ဖြစ်တဲ့ iPhone 11 Pro ဟာ iPhone ရဲ့ 13th generation ဖြစ်တဲ့ Flagship စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်ပြီး Pro version ဖြစ်တဲ့အတွက် စွမ်းဆောင် ရည်တွေကတော့အံ့မခန်းပဲဖြစ်ပြီး အရှေ့ကင်မရာရောအနောက် ကင်မရာပါတော်တော်လေး သိသိသာသာပိုမို ကောင်းမွန်လာပါတယ်။ ၎င်းဟာ ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်လာလလောက်က iPhone 11,...
Phones author 1 - January 2, 2020
ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ လူကြိုက်များသော Brand တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Samsung ကနေ 2019 နှစ်အစ ဇန်နဝါရီလမှာ ဘတ်ဂျက်စမတ်ဖုန်းစျေးကွက်ကို ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ မိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ ဖုန်းတွေကတော့ Galaxy M10 နဲ့ Galaxy M20 စမတ်ဖုန်းတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ M10 မှာ Fingerprint Sensor မထည့်သွင်းပေးထားပါဘူး။ M20 မှာတော့ Fingerprint Sensor...
Phones author2- December 28, 2019
ဒီတစ်ပတ်မှာ Flagship ဖုန်းတွေထဲက Vivo X21 UD နဲ့ Huawei P20 Pro တို့ကို လေ့လာကြည့်ရအောင်။ Flagship ဖုန်းတွေဖြစ်ကြပြီး ပါဝင်တဲ့ Specs နဲ့ Feature တွေကလည်း အံ့မခန်း လောက်အောင် အဆင့်မြင့်မားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဖုန်းနှစ်လုံးစလုံးဟာ iPhone X နဲ့ တော်တော်လေးကို ဆင်တူပြီး...
Phones author 1 - December 24, 2019
2018 ခုနှစ် နှစ်လယ်ပိုင်းလောက်က ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ Xiaomi Mi 8 ကို ထပ်မံအဆင့်မြှင့်တင်ထားတဲ့ မော်ဒယ်အသစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Xiaomi Mi9ကို ပြီးခဲ့တဲ့ 2019 မတ်လလောက်က ထုတ်လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းဖုန်းဟာ သူနဲ့ ပြိုင်တူထွက်ရှိထားတဲ့ Xiaomi Mi9Explore နဲ့ တော်တော်လေးကို တူညီမှု ရှိပါတယ်။...
မကြာမီက မြန်မာနိုင်ငံစျေးကွက်ထဲကို စတင်ရောက်ရှိလာတဲ့ Huawei Y9 Prime (2019) ဟာ နောက်ဆုံးပေါ် ဒီဇိုင်းပုံစံနဲ့ ထွက်ရှိလာခဲ့ပြီး အရည်အသွေးလည်း မြင့်မားပါတယ်။ ၎င်းကို GSM, HSPA နဲ့ LTE networks တွေမှာသုံးနိုင်ပြီး Single SIM နဲ့ Dual SIM ဆိုတဲ့ version ၂ မျိုးကိုထုတ်လုပ်ပေးထားပါတယ်။...